Tibetan ukucula nezitsha - ke ingenye amathuluzi oluyimfihlakalo kunalo lonke lisetshenziswe ukwelashwa umsindo. Sound ojabulela isikhundla uyayala e ukuphulukiswa nemikhuba isiko semiphakathi eminingi yasendulo. Ngokwesibonelo, izakhamuzi zase-Afrika, futhi wamaNdiya aseMelika basebenzisa izindlela ezihlukahlukene izigubhu, kanye Avstraliyskie Aborigeny - kakhulu lasendulo umoya ithuluzi elenziwe kusukela zikagamthilini didgeridoo. Futhi emazweni Asian wasebenzisa "ukucula" izitsha gongs.
Umlando ukusetshenziswa umsindo for ekwelapheni isihlale iminyaka engaphezu kwemihlanu amawaka, ubangelwa isiko amaVeda. Kuyaphawuleka ukuthi ngo-ifa Western futhi kukhona ubufakazi eziningi zokwelapha imithelela umsindo emzimbeni futhi umoya.
Umlando ukuvela Tibetan ukucula nezitsha
ukucula Tibetan nezitsha obizwa nangokuthi zaseHimalaya, ngoba ezweni lawo kubhekwa zaseHimalaya. Ngamanye amazwe ase-Asia nezitsha eze ukusabalala Buddhism. Kwaphela isikhathi eside izitsha bebecula hhayi kuphela insimbi yomculo efana isikhencezo, kodwa futhi into ebalulekile mkhosi. Namuhla, nezitsha Tibetan esetshenziswa emazweni ase-Asia, futhi hhayi kuphela engcwele, kodwa futhi izinjongo abavamile kakhulu. Emazweni European nezitsha kwalethwa by izindela Tibetan, ngubani zaphoqeleka ukuba zibalekele ENtshonalanga ngemva Tibet yanqotshwa China ngo-1959.
Izici Tibetan ukucula nezitsha
Tibetan ukucula isitsha - ucezu esiyindilinga ipuleti lensimbi ububanzi ngamasentimitha amahlanu mahlanu. isitsha lungaba amakhilogremu ambalwa. Kukhona izitsha mechanical isandla. inkomishi Mechanical, ngokuvamile wazenza ngethusi ezivamile umshini ngesandla cast amakhosi ngomshini. Lapho ingxubevange kuzomele sifake izinsimbi okungenani eziyisikhombisa ezehlukene ithini mercury, ithusi, umthofu, insimbi zegolide nezesiliva. Kwezinye izimo, it is wanezela bismuth ne-zinc. ukwakhiwa okunjalo ngezinto ekhethwe ithuba. Ngo esoteric element ngayinye lihlotshaniswa iplanethi ethile futhi ezithile zabantu amandla isikhungo.
Ukuze uthole umsindo, sebenzisa izinti ezikhethekile noma mallets ezenziwe ngokhuni. Friction inamathela phezu kwensimbi edonsa ukucula umsindo isici kunyakaza ezijulile. Palette umsindo nokudludliza incike impahla lendebe yokukhiqiza indlela yayo.
nezitsha Ukwelashwa ukucula
Umthelela ukuphulukiswa Tibetan ukucula nezitsha kufezwa ngokusebenzisa ukubhucunga umsindo. Izinhlaka umzimba ube yabo oscillation imvamisa nokungena resonance ngomsindo esitsheni dlidliza ephendula. Ngaphezu kwalokho, kwezinye izindawo zomzimba kunzima kakhulu ukuqhuba massage njalo, futhi vibration nezitsha umisa isiguli nombono ofanayo futhi sneaks kuwo wonke amangqamuzana zomzimba womuntu.
Tibetan ukucula nezitsha neqhaza muscle, usizo ingcindezi ephakeme nekhanda. yokwelapha Vibration kuyinto ikhambi elihle kakhulu ukucindezeleka, ukucindezeleka, ukuqwasha, ukucasuka kanye nezinye uthi edabukisayo.
Tibetan ukucula nezitsha ingasetshenziswa hhayi kuphela sessions eyimfihlo massage, kodwa futhi ngokuhlanganyela yokwelapha umsindo izikhathi. Kulokhu, umsindo vibration we nezitsha ukuthuthukisa luphulukisa kuhlangene nezinye izinsimbi zakudala: izigubhu, gongs, ihabhu komJuda sika, izinsimbi kanye nokunye.
Uvuko Cathedral (Cherepovets). Umlando Nezanamuhla
Uyini iklabishi: grade, incazelo, isithombe, ukutshalwa
Panel steel radiators: izici nezinhlobo
Indlela ukufaka Google Play?